Laser Cutting Machine, Laser osise Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser
Ịkpọ Laser Die Cutting Machine
Mmadụ Bịa ka ọlaedo laser
Golden Converse na-elekwasị anya na-enye nwere ọgụgụ isi, digital, na akpaghị aka laser ngwọta.
Emeputa nke laser usoro maka ịcha, osise na-akanye. The ọkachamara ke CO2 laser ọnwụ igwe na Galvo laser igwe.
Site mbụ ize ka ngwa ule na gị e mere ihe na-kpọmkwem ụlọ ọrụ ọzụzụ maka ọrụ na n'ụwa nile ọrụ - Golden laser awade mbara laser ngwọta, ọ bụghị nanị na a otu igwe!
na-atụ aro na ígwè ọrụ
Model Ee: JMCCJG-350400LD
CO2 Laser cutter maka Myọcha Cloth / Industrial filtration akwa
High nkenke gia na ogbe. Ịcha ọsọ ruo 1200mm / s. World-klas CO2 metal RF laser 150W, 300W, 600W. Agụụ ebu. Automatic nri, ahụ erughị ala mgbazi.
Model Ee: JMC-250300LD
Gear & ogbe akwagharị CO2 Laser cutter maka ụzụ Textiles
The gia & ogbe chụpụrụ laser ọnwụ igwe bụ ike ịrụ elu ike CO2 laser tube. Ọ ọfiọkde super elu osooso ọsọ na ọnwụ ọsọ na-efe efe Gbasara Anya.
Model Ee: JMCCJG-160300LD
High Speed ​​uwe Fabric Laser Cutting Machine
N'ihi na usoro & obere ogbe na iche iche na ụdị uwe mmepụta, karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ahaziri uwe. Ebu na-arụ ọrụ table, akpaka feeder na ogologo nesting.
Model Ee: XBJGHY-160100LD II
Independent Dual Head Akpụkpọ anụ Laser Cutting Machine maka akpụkpọ ụkwụ
Abụọ laser isi na-arụ ọrụ onwe ha nke onye ọ bụla ọzọ nwere ike ibelata dị iche iche ndịna n'out oge. A dịgasị iche iche nke laser nhazi (laser ọnwụ, punching, scribing, wdg) nwere ike okokụre otu mgbe.
Model Ee: ZJJF (3D) -160LD
Nyefee na tụgharịa efe Fabric Laser osise Machine
3D ike Galvo usoro, gụchara na-aga n'ihu osise marking n'otu nzọụkwụ. "Na ada" laser technology. Adabara nnukwu format ákwà, akwa, akpụkpọ anụ, denim, Eva osise.
Model Ee: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser Akpụkpọ anụ osise Cutting Machine maka Akpụkpọ ụkwụ Industry
Top ọsọ na Large format laser osise, perforating na ọnwụ. Dual ịnya ụgbọ ala usoro na gia ogbe Ọdịdị. Kachasị galvanometer usoro.
Model Ee: ZJ (3D) -9045TB
High Speed ​​Galvo Laser osise Machine maka Akpụkpọ anụ Akpụkpọ ụkwụ
CO2 RF metal laser 150W 300W 600W. 3D ike galvanometer akara usoro. Automatic na ala Z axis. Automatic mgbagharị zinc-ígwè alloy n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ na-arụ ọrụ table.
Model Ee: ZJJG (3D) 170200LD
Galvo Laser Ịcha na Perforating Machine maka Jersey Fabric
A vasatail laser ígwè ọrụ nke pụrụ bee, kanye, perforate na susuo-bee maka eri, polyester, microfiber, ọbụna gbatia ákwà.
Model Ee: CJGV-160130LD
Vision laser bụ ezigbo maka ịcha dijitalụ obibi sublimation akwa akwa nke niile shapes na nha. Ese foto iṅomi ákwà, ịchọpụta na-aghọta e biri ebi ngwe, ma ọ bụ bulie na e biri ebi aha akara na bee họọrọ aghụghọ na-agba na izi ezi.
Model Ee: JGC-160100LD
High nkenke ndebanye akara n'ọnọdu na ọgụgụ isi deformation akwụ ụgwọ maka n'ụzọ ziri ezi laser ọnwụ nke e ji esiji ákwà sublimation biri ebi logos, akwụkwọ ozi na nọmba.
Model Ee: XBQNZDJG-160120LD II
Independent abụọ isi Vision Camera Laser cutter Machine
The onwe ha abụọ isi laser ọnwụ usoro ihe n'ụzọ zuru okè jikọtara na smart ọhụụ usoro, na n'ihu kachasị na chọrọ nke e biri ebi ndịna nhazi.
Model Ee: CJGV-320400LD
Wide Format Laser Cutting Machine maka ọkọlọtọ, Ọkọlọtọ, Soft signage
The nnukwu ọhụụ laser cutter bụ n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na dijitalụ ebipụta ụlọ ọrụ - amị enweghị atụ ike n'ihi gụchara obosara format digitally e biri ebi ma ọ bụ na e ji esiji ákwà-sublimated akwa ndịna, ọkọlọtọ na juu signage.
Model Ee: LC-350
Roll na Nyefee Label Laser Cutting Machine
Golden Laser ka etinyere ulo oru laser technology na ubi nke onwe-nrapado kpọọ ịnwụ ọnwụ. Na anyị mpịakọta tụgharịa laser ọnwụ usoro, i nwere ike bee ezigbo kpomkwem nyagide kpọọ, e biri ebi kpọọ, akwụkwọ mmado, akwụkwọ, film, wdg
Model Ee: LC-230
Nke a laser anwụ cutter kacha web obosara 230mm, na CO2 RF laser 70W, 100W ma ọ bụ 150W. Na anyị mpịakọta tụgharịa laser ọnwụ usoro, i nwere ike bee ezigbo kpomkwem nyagide kpọọ, e biri ebi kpọọ, akwụkwọ mmado, akwụkwọ, film, wdg
Model Ee: LC230
Laser Die Ịcha Machine maka reflective Ihe / Nyefee Film
Laser anwụ-ebipụ reflective ihe onwunwe, zuru okè maka elu-visibiliti uwe ụlọ ọrụ. Dum na-usoro akpaaka. Kpomkwem laser ọnwụ
Anyị na-enye ngwa ngwọta dabeere na laser technology. Họrọ ụlọ ọrụ: kacha adabara laser ngwọta nri maka ị
Pụrụ Iche & ọkọlọtọ
Tube & anwụrụ
metal mpempe akwụkwọ
Na ike technology ọhụrụ, Golden Laser bụ ike inye ahaziri laser igwe na ngwọta, mee ka gị na mmepụta ihe oru oma na uru.
Ka epoch-eme nkà na ụzụ ọhụrụ, laser na-emepe emepe na-enweghị atụ uru, dochie ọzọ na ndị ọzọ omenala n'ibu.
Laser Systems Broshọ
Always enye nkwado ọrụ. Engineers dị ka ọrụ ígwè esenidụt maka echichi ọrụ, ọzụzụ ije ozi na mmezi ọrụ.
Nkenke Manufacturing Ịchụso Ezigbo
Laser Solutions eduga Provider
Site isua 20 'ahụmahụ laser ụlọ ọrụ, nọgidere na-emepe emepe na-eji elu teknụzụ, ọlaedo laser aghọwo a na-eduga emeputa nke laser igwe na ọkaibe customization ike.
Golden Converse na-enye gị ọkachamara laser ngwọta maka gị kpọmkwem ngwa ụlọ ọrụ - enyere gị aka dịkwuo arụpụtaghị, mfe nhazi usoro na-eme ka ndị ọzọ uru.
Na esenidụt ahịa, ọlaedo laser eguzobewo a tozuru okè ahịa netwọk na ihe karịrị 100 mba na mpaghara n'ụwa nile, anyị na mpi ngwaahịa na ahịa na-edebere ndị ọhụrụ usoro.